Isicoci saManzi abandayo eWholelisali esiNgcaliyo esinoMvelisi oGqwesileyo wokuSebenza kunye noMboneleli |I-Skylark
Isicoci saManzi abandayo esiNgcali ngokuSebenza okugqwesileyo
I-Cold Water Detergent yenzelwe ngokukodwa ukucoca ilinen yezoshishino, enokucocwa ngokuthe ngqo ngamanzi abandayo.Yinto yokucoca i-alkaline ebuthathaka kwaye ayisoze yonakalise ilinen.Ukuphucula umgangatho wokuvasa ilinen kunye nokwandisa ixesha lokusetyenziswa kwelinen, ukonga ukusetyenziswa komphunga namanzi.
Ehlabathini lonkeumthengisi, umthengisikwayeumenziyeemveliso zokuhlamba ilaphu ezikumgangatho ophezulu ezineminyaka engama-21 ye-R&D.Sinokuvelisa iimveliso zeLogo yakho ngokweemfuno zakho.Sijolise ekuboneleleni ngokufanelekileyo, ngokusingqongileyo, umgangatho ophezulu, iimveliso ezigxininisiweyo.
Isicoci samanzi abandayo
Isetyenziselwa ukuhlamba amalaphu ebhedi, iiduvet covers, pillowcases kunye namanye amalaphu kwiifektri zokuhlamba, iihotele, izibhedlele kunye namanye amashishini.
Susa ubumdaka obunenkani, amabala e-oyile, amabala egazi, kwaye ugcine ilaphu liqaqambile.
Ulwelo lokuhlamba amanzi abandayo lutyebile kwizinto ezisebenzayo ze-ionic, ezinokususa ubumdaka obunenkani, amabala e-oyile, namabala egazi, kwaye ugcine ilaphu liqaqambile.
Idibanisa itekhnoloji engundoqo ezintandathu: ukucocwa, ukususwa kwe-static, amalaphu athambileyo naqaqambileyo, amagwebu aphantsi kunye nokulula ukucoca, ukumelana nentsalela, kunye nokusebenza okubanzi.I-detergent ye-alkaline ebuthakathaka ayiyi kulimaza ilinen, ukuphucula umgangatho wokuhlamba welinen, kunye nokwandisa ubomi benkonzo yelinen.Ityebile kwi-concentrated compound surfactants, ikhupha izithako ezisebenzayo ezisebenzayo, inamandla okuphelisa iintsholongwane, kwaye inciphisa ngokufanelekileyo ukubola kwamabala.Iprotease eyongeziweyo inokungena kwimicu yelaphu kwaye isuse amabala anzulu.
1. Le mveliso inokulayishwa ngokuzenzekelayo ngenkqubo yokusabalalisa ngokuzenzekelayo.
2. Umthamo wale mveliso uxhomekeke kwiqondo lebala:
Itheyibhile yereferensi yomthamo we-100kg / umatshini wokuhlamba
Idosi yesalathiso sesidanga (iyunithi: g)
Yongeza izinto ezincedisayo (i-hydrogen peroxide, i-emulsifier, umbala we-bleaching powder, i-chlorine bleaching powder, njl.) ngokwemeko ngexesha lokuhlamba.
● Gcina kwindawo ekude nabantwana.Kuphephe ukudibana namehlo okanye ulusu, ukuba udibana, gubha ngamanzi kwaye ubone ugqirha.Ukuba uginyiwe, nceda ubone ugqirha.
● Gcina kwindawo eyomileyo nepholileyo.
Q: Ndinganalo uyilo lwam olulungiselelwe imveliso kunye nokupakishwa?
A: Ewe, unako OEM njengeemfuno zakho.Vele usinike umzobo oyilelwe thina.
Umbuzo: Ithini imiqathango yentlawulo?
Umbuzo: Wenza njani umzi-mveliso wakho malunga nolawulo lomgangatho?
Ngaphambili: Isicoci esiPhezulu seKhola ngokuSebenza okuGqwesileyo
Okulandelayo: UbuGcisa obuFanelekileyo obuPhezulu beKlorini yokuBilisa iPowder enoKusebenza okugqwesileyo
Umgubo ocociweyo wegazi lobuNgcali nge-E...
UbuGcisa boBubushushu obuphantsi obuNeutralizing Acid ...
Eyona Powder idume kakhulu yokuthambisa ngeExcel...
Iarhente yobuNgcali beAcid emhlophe Egqwesileyo...
Ubuchwephesha bePowder yokuBilisa ngemibala Egqwesileyo...
ILowuni yobuNgcali yoKuvasa ePhakamileyo Egqwesileyo...